Ezokuvakasha e-Australia - Konke ongakubona nokukwenza | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Australia yizwe elise-Oceania elihlanganisa kokubili imilingo yamakhona alo njengamabhishi, kanye namasiko ahlukahlukene okufanele ukuwahlola. Ngakho-ke izinhlobo zezivakashi zibanzi ngokwedlulele. Lapho sesinyathele phansi, kufanele siye eSydney Opera House, wonke umsebenzi wobuciko owenzelwe imibukiso. Futhi eSydney sithola iHort Bridge, kanye netheku lalo, iSt Mary's Cathedral namabhishi alo.
Uma siya eMelbourne ngeke siphuthelwe umtapo wezincwadi waso, kanye neBotanical Garden noma imakethe yaseQueen Victoria. Ngaphezu kwalokhu okubili okushiwo, kunamadolobha amaningi esingeke sawakhohlwa ohambweni lwethu, njengeBrisbane, i-Adelaide, iPerth noma iGold Coast, phakathi kwamanye.
Vele, ngaphezu kwamadolobha nakho konke okuhle kwawo, asikwazi ukukhohlwa indawo yepaki futhi i-Australia isizakala kahle. Ezinye zezindawo ezaziwa kakhulu yiNambung National Park noma iPurnululu neKarijini. Kepha mhlawumbe okukhulunywa kakhulu ngaso sonke isikhathi yiPaki labaPhostoli abali-12. Ngaphezu kwezimpophoma zaseWallaman noma iziqhingi zayo kanye neBarrier Reef. Ukhetha ukuqala kuphi umzila wakho?
Por Isabella kwenza Izinyanga ze-3 .
IPlanethi enguMhlaba iyindawo ethokozisayo engapheli ukusimangaza. Ubuwazi ukuthi e-Australia kukhona ichibi eline ...
Por maruuzen kwenza Izinyanga ze-3 .
Elinye lamazwe abaluleke kakhulu e-Oceania yi-Australia, izwe elikude namuhla elibonakala njengendawo engenacala ...
Por Luis Martinez kwenza Izinyanga ze-5 .
Azikho izinto eziningi zesayensi nezobuchwepheshe zase-Australia njengalezo ezitholwe kwamanye amazwe omhlaba. Isizathu silula: ...
Yiziphi izinkampani ezinkulu zase-Australia? Lo mbuzo uyivelakancane ngaphandle kwemibuthano yezomnotho ekhethekile. Kuvuliwe…
Ukwazi ukuthi abantu base-Australia babingelelana kanjani
Por Isabella kwenza Izinyanga ze-5 .
Uma eholidini lakho elilandelayo ufuna ukuthatha uhambo oluya e-Australia noma ungathanda ukuyofunda kuleli zwe, ...
Por Luis Martinez kwenza Izinyanga ze-6 .
Imvelo e-Australia yehluke kakhulu futhi icebe kakhulu. Khumbula ukuthi sikhuluma ngezwe elikhulu ...
Njalo ngonyaka izinkulungwane zezivakashi zivakashela e-Australia ukuthola izwekazi lesiqhingi futhi zijabulele indlela yokuphila yase-Australia. Futhi lokho…
Inja ebomvu, inja yasemadolobheni yenganekwane
Por Daniel kwenza Izinyanga ze-11 .
Inja ebomvu yaba enye yezinja ezidume kakhulu emhlabeni ngenxa ye-movie ethi «Inja Ebomvu,…
Izilwane zase-Australia zehlukile
Esinye sezizathu eziningi ezenza i-Australia ibe yizwe elihehe kangaka ingcebo yalo yemvelo ehlaba umxhwele. Izilwane ...
Abadlali abadumile be-tennis base-Australia
Por Luis Martinez kwenza Izinyanga ze-11 .
Abadlali be-tennis abadume kakhulu e-Australia benze izwe labo laba namandla amakhulu kwezemidlalo. Ngaphandle…
Australia nenkinga yengubo yayo yendabuko